Soo dejisan Ustream 2.7.8 – Vessoft
Soo dejisan Ustream
Ustream – software ah in ay sii qulquli video ah in waqtiga dhabta ah. Ustream awood u oggolaanayaa in oo baahiyey shabakadda video u gaar ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad ka tago comments iyo abuuro doorashada. In Ustream oo dhan dhacdooyinka hoorto qaybsan yihiin qaybaha, oo awood si aad u hesho video la doonayo. Software ka kooban feature ah, in kuu ogolaanayaa inaad si ay u wadaagaan warbaahinta iyada oo codsiyada kala duwan. Ustream ayaa interface ku ogaado iyo fududahay in la isticmaalo.
View iyo sii daynta qulqulaya video
Awooda inuu ka tago comments
Search haboon ee la doonayo videos
Ustream Software la xiriira:
Streaming video Ayaa loo jecel yahay madal video geeyo si aad u eegto warbaahinta kasta oo ciyaaraha kombuyuutarka iyo Console. Software wuxuu taageeraa image sare tayada warbaahinta internetka iyo duubay video.
العربية, English, Українська, Français... Show Box 4.61
Streaming video Torrent software The si aad u eegto movies iyo TV muujinaysaa online in qeexitaanka sare. software The u saamaxaaya in ay soo bixi content warbaahinta xawaare sare.
Torrent Streaming video software ah in soo bixi ama si aad u eegto movies oo taxane ah oo noocyo kala duwan oo online. software waxa uu leeyahay tiro balaadhan oo ah qalab loogu talagalay isticmaalka fudud ee adeegga.
Streaming video Software si loo xakameeyo qalab Chromecast ah. Software ayaa awood u baahinta qoraallo nuxur ka soo smartphone ama kiniin kombiyuutar si ay HD-TV.
العربية, English, Українська, Français... Dailymotion 4866
Streaming video Mid ka mid ah adeega video ugu caansan saldhig badan oo kala duwan ka kooban. Software waxay leedahay engine search anfacaya iyo awoodda ay u geliyaan videos in shabakadda.
العربية, English, Українська, Français... Asana 4.8.6
Qaar kale waxay Software diiwaanka fikrado ayna qorshaynayso joogtada ah ee maalin kasta. Codsiga waxaa awood u siday u maamulaan hawlaha kala duwan oo si wadajir ah iyaga edit ka qaybgalayaasha kale mashruuca.
العربية, English, Українська, Français... Link2SD 4.0.12
العربية, English, Українська, Français... LinkedIn 3.5.3
Network Bulshada Shabakadda bulshada diirada saaraya mawduuc ee Oogidda xiriirrada ganacsiga. Software ayaa awood u aheyn inay dib u shirkadaha kala duwan ee caalamiga ah iyo wakiilladooda.
العربية, English, Українська, Français... Hearthstone 3.0.9791
Games Kulanka guddiga online oo waxay ku salaysan tahay dagaal oo midkayana ku leexan-ku salaysan mid u dhexeeya laba horjeeda. Ciyaarta ayaa waxay bixisaa wax badan oo ka mid ah u dhaqaaqdo istiraatiiji ah oo qorshaynaysa in ay gaadho natiijada ugu wanaagsan.
العربية, English, Українська, Français... Retrica 2.3.3
Photo Software la set badan oo ah qalab iyo saamaynta si loo farsameeyo sawirada. Codsiga macaamila camera ka mid ah qalabka iyo taageerada goobaha kala duwan si ay u abuuraan oo sanamyada tayo sare leh.